🎰Chaizvo mabhonasi pasina kuzadzikiswa kweiyo account yemitambo muFastPay online kasino
Maitiro ekuti usvike hapana mabhonasi emabhangi
Hapana dhipoziti yemahara spins Mugovera wega wega
Bhavhidha Hapana Deposit Bhonasi
Mwedzi wega wega kudzoka mari pasina wager
Maitiro ekusarudza kubva pane isina dhipoziti bhonasi
Nei mutambi achigona kusabviswa muchirongwa chekuvimbika
Iyo yepamhepo kasino kuvimbika chirongwa chinotamba chakakosha basa mukusarudza rakanakisa chikuva chevabhejeri. Panguva imwecheteyo, havazi vese vashandisi vakagadzirira kuisa mari kuaccount kuti vagamuchire ekushambadzira zvinopihwa, vachisarudza hapana mabhonasi edhipoiti. Fastpay haina chirongwa chakatambirwa chakazara cheichi chimiro, asi panguva imwecheteyo vatengi vayo vanowana mukana wekuramba vachikwenya reels pasina njodzi. Iye mutambi anofanirwa kunzwisisa kuti zvinopihwa zvemahara zvinokonorwa zvinouya chete kwaari kana achigara achiita akasiyana mashandiro paaccount. Kana icho chikuru chinangwa chekunyoreswa pane yepamutemo Fastpay webhusaiti ndeyekugamuchira iyo hapana dhipoziti bhonasi, saka pane hushoma hwepfungwa mune izvi.
Iyo algorithm yezviito zvekumisikidza iyo Fastpay hapana dhipoziti bhonasi ine zviito zvinotevera.
Enda kune yepamutemo webhusaiti yepamhepo kasino. Shandisa girazi kana zvichidikanwa.
Sarudza chikamu chekunyoresa mukona yepamusoro yekurudyi.
Mune fomu yepop-up, pikisa bhokisi rakachengeterwa mvumo yekutora chikamu muchirongwa chekuvimbika.
Mune ramangwana, mutengi wekambani anogara achigamuchira mabhonasi zvinopihwa. Huwandu hwemahara ekurukwa kana emabhonasi mari inoenderana zvakananga nenhanho yemubhejera mune yepamhepo kasino VIP chirongwa. Iyo yakakwira iyo, iyo inobatsira kwazvo inopa ichagamuchirwa.
Kana mushandisi asina kugutsikana nehurongwa hwekuvimbika kwekambani, uye achizoramba, saka kuvhiya uku kunoitwa kuburikidza neakaundi account. Mamiriro ehunhu anogona kuchinjwa chero nguva.
Inonyanya kufarirwa Fastpay hapana dhipoziti kupihwa yemahara spins inowanikwa kune vanoshanda vatambi musi weMugovera. Huwandu hwemahara spins zvinoenderana nezinga remumwe mushandisi. Yenhanho yekutanga, ivo vasipo zvachose. Kana tikataura nezve zvimwe zvese, vatambi vanowana:
Chikamu 2 - 15 yemahara spins (iyo yakanyanya mihwina mibairo yakaiswa pa50 EUR, 50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT. Kubhadhara kubheja - x50).
Chikamu 3 - 25 yemahara spins (50 EUR, 50 USD, 75 CAD, 75 AUD, 75 NZD, 500 NOK, 225 PLN, 6000 JPY, 800 ZAR, 0.005 BTC, 0.125 ETH, 0.24 BCH, 0.95 LTC, 22,000 DOGE, 58.5 USDT .x45).
Chikamu 4 - 35 yemahara spins (75 EUR, 75 USD, 112.5 CAD, 112.5 AUD, 112.5 NZD, 750 NOK, 338 PLN, 9000 JPY, 1200 ZAR, 0.0075 BTC, 0.1875 ETH, 0.36 BCH, 1.425 LTC, 32.925 DOGE, 87 USDT .x40).
Chikamu 5 - 45 yemahara spins (75 EUR, 75 USD, 112.5 CAD, 112.5 AUD, 112.5 NZD, 750 NOK, 338 PLN, 9000 JPY, 1200 ZAR, 0.0075 BTC, 0.1875 ETH, 0.36 BCH, 1.425 LTC, 32.925 DOGE, 87 USDT .x35).
Chikamu 6 - 55 yemahara spins (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x30).
Chikamu 7 - 75 yemahara spins (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x25).
Chikamu 8 - 100 yemahara spins (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x20).
Chikamu 9 - 150 yemahara spins (100 EUR, 100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT .x20).
Chikamu 10 - 500 yemahara spins (150 EUR, 150 USD, 225 CAD, 225 AUD, 225 NZD, 1500 NOK, 675 PLN, 18,000 JPY, 2400 ZAR, 0.015 BTC, 0.375 ETH, 0.72 BCH, 2.85 LTC, 66,000 DOGE, 175.5 USDT. X10).
Uye zvakare, Fastpay yemahara spins inogona chete kugamuchirwa nevatambi avo, mukati memazuva matanhatu, vakaita kubhejera muhuwandu hwe100 USD, 150 CAD, 150 AUD, 150 NZD, 1000 NOK, 450 PLN, 12,000 JPY, 1600 ZAR, 0.01 BTC, 0.25 ETH, 0.5 BCH, 1.9 LTC, 44,000 DOGE, 117 USDT. Iwe unogona kushandisa emahara spins kusvika kumagumo einotevera kutenderera yekusimudzira iyi (kwemazuva manomwe).
Vashandisi vepamhepo kasino vanogona kutarisira Fastpay's kwete dhipoziti yekuzvarwa kupihwa. Nekudaro, kuti bhonasi iyi iwanikwe, mutambi anofanira kutora huwandu hwemapoinzi anoenderana nezinga rake mugore rekarenda. Kana iko kuita panguva yakatarwa kwanga kushoma, saka haufanire kutarisira kuwana mahara spins.
Vashandisi vekutanga vekutanga havana mukana wekusimudzira uku. Kubva wechipiri kusvika kune wechinomwe "nhanho" vanogashira imwe huwandu hwemahara spins (kubva pamakumi maviri kusvika mazana matatu).
Vatambi vakatsiga vane nhanho kubva pa8 kusvika ku10 vanogamuchira mari kune imwezve account.
Iko kubheja kubheja bhonasi rekuzvarwa pamatanho ese kwakafanana uye kwakaenzana neX10.
Vashandisi veNhamba 9 ne10 vanogona kutarisira kudzoserwa mari mazuva ese makumi matatu. Huwandu hwemari dzakadzoserwa hunoverengerwa zvinoenderana nehuwandu hwekurasikirwa nemambure pane michina yekubhejera. Mari inotumirwa kune vanobhejera pazuva rekutanga remumwe mwedzi.
Chinhu chakakosha chebhonasi ndechekuti mutambi haafanire kuwedzera kubheja zuva kuitira kuti vawane mukana wekubviswa kwavo muakaunzi yeFastpay. Ndokunge, wager yakaiswa - x0. Vashandisi vane chiyero chakaringana kwenguva yakati havagone kutarisira kudzoka mari.
Anoshandisa online kasino anogona kuzvinyoresa kubva kuchirongwa chekuvimbika chekambani chero nguva. Kuti aite izvi, iye anofanirwa kuenda kuaccount yake yega uye osvinura munda unoenderana. Kuti ubatanidzwezve, unofanirwa kuiisazve.
Mune chero online kasino pane chikamu chevatambi vanogadzira account chete nekuda kwemabhonasi zvinopihwa. Kana vashandi vekambani vachifungidzira mushandisi wekubiridzira, vanogona kutumira chikumbiro chekusimbiswa. Kana, muchiitiko checheki, kuwanda-accounting (kugadzirwa kwemaakaunzi akati wandei) zvichiratidzwa, saka mubhejeri akadaro anotorerwa mukana wekugamuchira mabhonasi. Nechiitiko chepamusoro chenguva, account yake ichavharwa pasina kodzero yekudzorera.